Waraana Yaman: Mootummonni Gamtoomanii buufanni Hudaayidaa banaa akka ta'uuf waamicha dhiyeesse - BBC News Afaan Oromoo
Waraana Yaman: Mootummonni Gamtoomanii buufanni Hudaayidaa banaa akka ta'uuf waamicha dhiyeesse
Goodayyaa suuraa Deeggartoonni Mootummaa Yaman buufata Hudaaydaa finciltoota Hooti irraa gadhiisisuuf yaalaa jiru.
Erga humnooti Saawudiin deeggaraman buufata Yaman Hudaayidaa harka finciltoota jala jirtu haleelaniin booda Manni Maree Nageenyaa Biyyoota Gamtoomanii marii ariifachiisaa taasisen buufatichi akka banaa ta'u irra deddeebiin gaafachaa jira.
Haa ta'uutii manni marichi isa Siwidiin waraanni hatattamaan dhaabbachuu qaba jettu kuffiiseera.
Humnooti Saawudiin deeggaraman mootummaa Yaman waliin finciltooti Hootii guyyaa gadhiisuu qaban dabarsaniiru jechuun ture kan haleellaa irratti banan.
Waraanni Yaman erga dhalatee buufatni Hudaaydaa karra ijoo gargaarasi namoomaa itti seenu dha.
Manni Maree nageenyaa Biyyoota Gamtoomanii marii hatattamaa Kamisa taa'een lolli kuni du'a namoota qulqulluu kumaan lakkaawaman fiduu akka danda'uufi hookkara namoomaa badaafi sababa akka ta'u yaaddoo isaa ibseera.
Mootummoota Gamtoomanitti ambaasaadarri Siwiidiin manni marichi lola dhaabsisuu qaba yoo jedheyyuu humnoota Saawudiifi Yuunaayitid Arab Imireet dhaabsisuuf deeggarsa gahaa hin arganne.
Waraanni Yaman bara 2015'tti erga jalqabeen booda jireenya jiraattotaa baayyee miidheera.
Yaman biyyoota Arabaa keessaa ishee hiyyeetti yoo taatu wal-dhabdeen ammaa kuni magaalota ishee uummata baayyee qaban sodaachisaa jira.
Sagantaan nyaataa Biyyoota Gamtoomanii bufatichi ammayyuu hojiirra jirachuu himee gargaarsi achitti barabaachisu baayyee waan taheef na yaadessa jedheera.
Hogganaan olaanaa Deeviid Beesleey ''dirqama namoota qulqulluu eeguuf qaban bahachuuf tarkaanfii hatattamaa taasisuun seera idila addunyaa namoomaa kabajuu qabu,'' jechuun miseensota hundaa akeekkachiisaniiru.
Viidiyoo Daa'imni lola Yamaniif mallattoo ture maal ta'e?